Ihe nzacha agba ọhụrụ ọhụrụ iji jiri na Instagram | Akụkọ akụrụngwa
A na-ahụta Instagram dịka ngwa ngwa eji eme ihe nke ndị na-eto eto (ọkachasị) ndị bịara nwee ọmarịcha onyogho na agwa njirimara nke enwere ike igosi ha nke ọ bụla n'ime foto ya.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu zuru oke nke Instagram nakweere na mmelite ọ bụla, n'ihi na mgbe emere ụfọdụ n'ime ha, anyị na-achọpụta mgbe niile na ebe ahụ etinyere agba ọhụrụ agba. Na mmelite kachasị ọhụrụ maka ngwaọrụ mkpanaka nwere iOS na gam akporo, etinyela ihe nzacha ọhụrụ abụọ, nke a na-ekwu na enwere ike ịmezi akụkụ ole na ole nke foto ahụ.
1 Kedu ihe nzacha ọhụrụ etinyere na Instagram?
2 Ebee ka achọtara ndị ọhụrụ a Instagram nzacha?
Kedu ihe nzacha ọhụrụ etinyere na Instagram?
Nke mbu, anyi aghaghi ikwu banyere ya na oburu na inwere Instagram na ngwa oru obula anyi kwuru n’elu, ikwesiri melite na ụdị kachasị ọhụrụ ma ọ bụghị ya, ị gaghị enwe ike ịmasị nzacha nke «Mmezu»Na«Agba«, Abụọ ndị a bụ ndị ọhụụ ọhụrụ nke ọtụtụ nhọrọ dị adị na ntanetị.
E nwere ụzọ dị iche iche iji tinye ihe nzacha abụọ a na onyonyo ndị ewere, nke ga-adabere na nka na nka nke onye ọ bụla n’ime ndị ọrụ ya. Ugbu a, n'ụzọ ị kwesịrị ịrụ ọrụ na ndị nzacha ndị a, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya n'ihi na ndị na-adịghị akwọ ụgbọala n'ụzọ zuru okè na ngwa Instagram a, nke a bụ ihe kpatara edemede anyị ugbu a, ya bụ, anyị ga-anwa ịkpọtụ "nzọụkwụ site na ntinye" ụzọ iji ruo ebe ebe nzacha ndị a dị, n'ezie, iji ha mee ihe maka onye ọ bụla foto anyị ga-ewere.
Ebee ka achọtara ndị ọhụrụ a Instagram nzacha?
Ndị nwere ahụmịhe nke ndị ọrụ nwere ike ịnwe ndụmọdụ ndị a dị ka ihe dị oke mkpa na enweghị isi, ọ bụ ezie na anyị ga-atụle na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ chọrọ ụdị a nkọwa iji mara otu esi arụ ọrụ na ọrụ ọ bụla na Instagram. Banyere ihe nzacha ọhụrụ abụọ ahụ anyị kwuru, ị nwere ike ịchọta ha mgbe ị see foto. Nke a pụtara na na onyogho ndị ahụ i sere na mbụ, ọrụ ndị ahụ nwere ike ọgaghị apụta.
Ya mere, anyị na-akwado ka ị pịa akara ngosi nke igwefoto (nke dị n'etiti etiti ala); ozugbo ahụ igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka ga-arụ ọrụ, na-ejide ihe ọ bụla ịchọrọ. N'ezie, ịnwekwara ike iwebata foto nke Osisi Osisi ma ọ bụ «Igwefoto nke mpịakọta». Mgbe inweela onye ọ bụla n’ime ha n’uche, nhọrọ ole na ole nke ihe nzacha ụcha na onyogho itinye ga-egosi na ala. Achọghị ọrụ ọhụrụ ahụ ma ọ bụ kama, mgbe anyị nwetara tPịa na akara ngosi “spanner” n’elu.
Ozugbo ịhọrọ akara ngosi a, ị ga-ahụ na ụdị akara ngosi ndị ọzọ na-egosi na ala, nke na-abịa ịrụ ọrụ iji jiri foto anyị. N'ime ha, ị ga-enwerịrị lee anya maka ndi na asi “Dim” na “Agba”; nke mbu meputara obere ichapu ihe onyonyo a, nke n’a gha enwe nfe karie ya na ihe mmịfe nke a ga-egosipụta n’oge ahu. Na ọrụ ọzọ (agba), mgbe ịhọrọ ya, agba ole na ole ga-egosi na ala, inwe họrọ nke ọ bụla n’ime ha jiri mgbata okpukpu abụọ nke mere na ihe mmịfe bọtịnụ na-egosi. N'ọnọdụ ọ bụla, a ga - eji "bọtị mmịfe" a nwee mmetụta dị ukwuu ma ọ bụ pekarịrị nke mmetụta achọrọ. Mgbe ịmechara nhazi ahụ, ị ​​nwere ike ịchekwa foto a ma mechaa kesaa ya na ndị enyi gị na Instagram.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Nzacha agba ọhụrụ abụọ iji jiri na Instagram
Nyefee iOS: Nyefee data n'etiti iOS na Windows ma ọ bụ ngwaọrụ Mac